Diblomaasi reer Venezuela ah oo lagu soo eedeeyay in uu dilay danjire Kenya fadhiyay - Sabahionline.com
Diblomaasi reer Venezuela ah oo lagu soo eedeeyay in uu dilay danjire Kenya fadhiyay
Maxkamad ku taal Kenya ayaa Isniintii (6-dii Agoosto) waxa ay ku soo eedaysay diblomaasi reer Venezuela ah in uu dilay ku-sumihii danjirihii dalkiisa, oo maydkeeda laga helay gurigeeda ku yaal Nairobi 27-kii June, sida ay warisay AFP.
Diblomaasi u dhashay Venezuela ayaa 6 maalmood oo kale ku sii xirnaan doona Kenya
10 kale oo lagu soo eedeeyay dabkii Mathare
Bilayska Kenya oo su'aalo waydiinaya 9 tuhmane arimo la xiriira geerida ergey Venezuela u dhashay
6 bilays Kenyan ah oo dil ay gaysteen dartii lagu xukumay toogasho
Dwight Sagaray, oo ahaa xoghayntii koowaad ee safaaradda, ayaa maxkamadda u sheegay in uunan galin dabmiga lagu soo oogay. Waxa uu ku sii jiri doonaa xabsiga, iyada oo la hakiyay dalab la rajaynayay oo ay qareennadiisu ku codsadeen in lagu sii daayo dammaanad.
Waxaa la qabtay maalin kadib markii la helay maydka Olga Fonseca Gimenez oo 57-jir ahayd, ahaydna ku-simihii danjiraha dalkeeda u joogtay Kenya.
Maxkamadda ayaa sidoo kale isaga oo maqan dambi dil ah ku soo oogtay Maxamed Axmed oo Keenyaan ah. Bilayska ayaa la siiyay amar lagu soo qabanayo.
Ka diblomaasi ahaan, Sagaray waxa uu xaq u lahaa xasaanad diblomaasiyadeed, laakiin taas waxa laga xayuubiyay ka hor soo qabashadiisa, ayay sheegeen saraakiisha Kenya.